Izimangaliso ziye zasetshenziswa kakhulu kuleli khulu leminyaka engamashumi amabili nanye ngenxa yokukhula kobuchwepheshe obusha. Futhi impumelelo yesayensi yanamuhla imbalwa kakhulu abantu abakwazi ukumangaza. Kodwa ukutholakala okukuningi nokuningi kusinika ulwazi mayelana nemvelo yomuntu, futhi ikhono lokubuyisela amangqamuzana omzimba lingenye yezinto ezitholakalayo. Ukuze ubuyisele amangqamuzana maduzane, i-nitrogen ye-liquid isetshenziswa kaningi. Kodwa abaningi abanokungabaza baqala ukubuza ukuthi izinqubo ze-nitrogen zamanzi ziyasiza yini. Singasho ngokuqiniseka ukuthi yebo.
Izinqubo eziwusizo ngokusetshenziswa kwe-nitrogen enamandla kulokho ngaphansi kwethonya lamazinga okushisa aphansi, ngosizo lwe-nitrogen, umzimba womuntu uqobo uvuselela, zonke izinqubo ezenzeka emzimbeni ziyashesha, ngaleyo ndlela zivuselele. Kodwa kungenzeka ukuthi i-nitrogen ayinqunyelwe kuphela ukuvuselelwa, iyakwazi ukususa ama-sub-standard (ukukhula, ama-warts) esikhumbeni somuntu.
Esikhathini sethu, kuye kwasungulwa izindlela eziningi ezivumela umuntu ukuba asindise ubusha bakhe isikhathi eside. Amathuba kule ndaba ye cosmetology ayinkulu kakhulu. Lezi yizo zonke izinhlobo zokubutheka, izinhlobonhlobo ze-serums nama-creams, ukuphakamisa, ukupenda, nokuhlobisa okuhlukahlukene kobuhle.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlinzwa kwepulasitiki kungasiza kulokhu, kodwa kungcono ukuyihlola ngemva kokunye ezinye izindlela ezingazange zenze imiphumela. I-Cryotherapy yayiyisisombululo sesimanje senkinga yokulondoloza intsha. Iyakwazi ukushintsha zonke lezi zinqubo kanye nama-creams abizayo.
Ukuze uqale inqubo, udinga ukucacisa ukuthi uzosebenzisa yini induku ejwayelekile, lapho i-cotton swab ekugcineni izolimaza, okufanele ifakwe kahle, noma i-applicator enephutha elingaguqulwayo. Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza, kubalulekile ukuthi isikhumba esisodwa sempilo enempilo siphinde sithathwe ngendawo yenkinga.
Induku ene-swab yekotini noma i-applicator yehla ebhodleleni le-thermos ne-nitrogen (i-thermos ekhethekile isetshenziselwa lokhu), emva kwalokho kuyadingeka ukuthi unamathisele i-wand (umfaki sicelo) ku-wart ngokushesha ngangokunokwenzeka. Okuvamile, okungahambi kahle, i-wart emva kokuqala ilahleka. Ngezinye izikhathi ukulungisa umphumela kubalulekile ukuphinda konke futhi. Kodwa ezimweni ezinzima zokususwa okuphelele kwegagasi kuzodingeka ukuthi uphinde uphinde wenze inqubo yonke izikhathi eziningi.
Uma inkinga i-papilloma noma enye i-neoplasm, ke-ke, ngemva kokubonisana nodokotela, ungathola izikhathi ezidingekayo zokuqeda ukungapheleli. Inqubo yokususa iyahlala efana neyasendleleni yempi.
I-Cryotherapy iyasiza nangamabala amadala noma ama-freckles. Kulesi simo, isikhumba sivele siphume futhi sishintshe amahlumela amasha ngaphandle kwezinkinga zangaphambilini.
Kanye nesikhumba, izinwele ezithandekayo nezinamandla nakho kuyimfuneko ebalulekile yobuhle nempilo. Kodwa ngezinye izikhathi izinwele ngaphansi kwethonya lokucindezeleka kwansuku zonke, imvelo noma ukungondleki kuqala ukugula nge-oborrhoea oily, ngaphandle kwalokho, ukulahlekelwa kwezinwele eziningi. Kulokhu, i-cryomassage izosiza futhi.
I-nitrojeni yotshwala evela e-thermos ekhethekile iqala ukuphambanisa amafucu, kuze kube yilapho isiqhwala sibe "seqhwa." Ezimweni eziyinkimbinkimbi kakhulu, lapho kuvela ubude be-nesting, futhi izinwele ziphuma ngaphandle kaningi futhi zivame kakhulu, kubalulekile ukuqondisa umfudlana we-nitrogen imizuzu engu-1-2 ngokuqondile ezindaweni eziyinkinga yekhanda. Le nqubo kufanele iphindwe izikhathi eziningana, emva kwesikhathi esithile, izinwele zizokhanya.
Ngesikhathi ukwelashwa kwezinwele nge cryotherapy, kubalulekile ukusebenzisa ukuqinisa izinwele zezinwele namavithamini. Kudingekile ukuhlinzeka izinwele zakho ngezinto ezidingekayo zokuzivikela, ngoba ukushisa okuphansi ngesikhathi senqubo kungathinta kabi isimo sabo - bayoba brittle futhi abomile.
Ukuze ubuyisele ubuhle kwezinye izingxenye zomzimba, i-nitrogen ye-liquid nayo ingasetshenziswa. Uyakwazi ukusiza ngesisindo esiningi ngokweqile, ubuhlungu bemisipha noma nge-cellulite.
Ukuqeda zonke lezi zinkinga, ngezinye izikhathi ngokwanele ukuya ehholo lezemidlalo, kodwa lokhu akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi, futhi imiphumela engcono kakhulu iyamukeleka kuphela uma ihlangene nezinye izindlela: izinqubo saloni, ukudla okunempilo, njll. I-cryocamera, i-cryosauna, ihlanganisa konke lokhu ndawonye , futhi uyakwazi ukuphuza ukuguga, ukulinganisela isisindo, unike amandla omzimba wakho nokuvumelana.
Ezweni lakithi, ngokungafani namanye amazwe athuthukile, kwakusanda kwenzeka nje ukuzwa ubuhle be-cryosauna emzimbeni wayo. Phakathi nale nqubo, umuntu uthola ithuba lokuzwa umphumela wamazinga okushisa aphansi egodini elilungiselelwe ngokukhethekile, lapho kudalwa umoya we-nitrogen. Ukushisa kunamandla okuwa phansi kumadigri ayikhulu namashumi ayisithupha ngaphansi kwe-Celsius. Phakathi nenqubo, ama-mittens afudumele namasokisi aboya kumele agqoke, njengoba imilenze nezandla zifakwe ngokushesha kakhulu, futhi ingozi yokuqhwala iyadalwa. I-cabin ngokwayo yenzelwe, ukuze iqhwa lingene ekhanda, ngakho ngeke limbozwe. Ukushisa okwesibini kwehla emzimbeni kuya ezigidini ezimbili ngaphezu kwe-zero. Ngomzimba womuntu, le nqubo iphephile ngokuphelele.
Ngemuva kwenqubo enjalo, imiphumela imane imangale: i-cellulite isabalala, imisipha ibe yesikhumba, ukuvuselelwa kwesikhumba, isisindo sinciphile. Umphumela onjalo kungenzeka kuphela ngoba ku-cryosauna kuphela isikhumba esiphezulu sesikhumba lapho i-receptors itholakala khona. Ngenxa yalokho, kunomzwelo wokuzizwa.
Ekuqaleni cryosauna yayihloselwe ukwelashwa. Kodwa-ke yaqala ukusetshenziswa njengendlela yokuvuselela. I-Cryosauna ithatha izifo ezinjenge-cardiovascular, umgogodla, isikhumba, isifo sokuphefumula, isigaba socansi, njll.
Uma i-cryosauna isetshenziswa emzimbeni womuntu, uhlu olukhulu kakhulu lwezifo lungelashwa noma luhlinzekwe okwesikhashana. Intsha nobuhle zihambisana nezimo lapho kutholakala uhlobo lwezinto eziphilayo e-cryosauna, futhi bamangala nje.
Lezi zinqubo ziwusizo ngoba uma zivezwe ku-cryosauna, i-endorphin enkulu ikhishwa emzimbeni womuntu, okuyinto i-hormone yenjabulo. Amazinga okushisa aphansi enza umuntu akhiqize inani elikhulu. Ngakho-ke, emva kwenqubo ngayinye ye-cryosauna, imizwa iphakama, efaka impumelelo, kokubili empilweni yomuntu siqu nasemsebenzini.
Ngaphambi kokusebenzisa i-cryosauna, kufanele uxhumane nodokotela wakho ukuze uphicilelwe. Uma kungekho ukuphikisana, khona-ke ungaya ngokuphepha enkambisweni ye-cryosauna, ungakhohlwa ukuthatha amasokisi afudumele namasitheni. Imiphumela emva kwenqubo izodlula konke okulindelekile.
Indlela engcono kakhulu yokushisa ilanga
Imithi yokwelapha, imithi yokwelapha
Izindlela zokuhlanza isibindi ekhaya
Territory of the dream: ingubo yasekuqaleni e-prom 2016
Ingulube izindlebe nobhontshisi kwisitayela sezwe
Izitayela zefashini zokugqoka izinwele
Izinzuzo Neziphuzo Ze-Vegetarianism
Ukupakisha kwevidiyo kwendawo yentamo nendawo yekholomu
Umsuka we-anyanisi nama-peas
Borsch nama beet abhakabhaka
Ikhono lobuciko obuhle
I-Baked Barbecue Baked
Siboleka izinto eziqoqweni zamadoda amasha
I-pizza inhlama emanzini ane-carbonate